မြင့်မားသော တိကျသော ထိုးဆေးပုံစံ
Cold Runner နှင့် Hot Runner Mold
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးထိုးစက်အသစ်ကို ကြည့်ပါ။
YF Mold သည် မှိုထုတ်လုပ်သူအဖြစ် စတင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိကျမှု၊ ဆန်းသစ်မှုနှင့် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှုဖြင့် လမ်းကို ဦးဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား အချိန်နှင့်ငွေကုန်သက်သာစေသော ဒီဇိုင်းအသေးစားပြောင်းလဲမှုများအတွက် အကြံပေးခြင်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို အကျိုးပြုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေက ခံယူချက်တွေကို အလေးထားကြတယ်..။
Tooling Life ကိုမြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းခြောက်ခု
ဆေးထိုးမှိုထုတ်လုပ်သူ၏ အမြတ်အစွန်းကို ထိခိုက်စေသော ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ အသက်တာသည် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များထက် မှိုသက်တမ်းကို ဖန်တီးရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပါက ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်အစွန်းသည် များစွာ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ မှိုဘဝတိုးတက်စေရန် နည်းလမ်းအချို့ဖြစ်သည်။ ၁။ မှန်တယ်...
မှိုပြုလုပ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည့်အခါ သင်လျစ်လျူမရှုနိုင်သော အရာသုံးမျိုး
ပလတ်စတစ်မှိုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် နှစ် 20+ အတွေ့အကြုံဖြင့် YF Mold သည် အတွေ့အကြုံရှိသော အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းနှင့် ကိရိယာထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် မျှော်လင့်ချက်များကို ပြည့်မီရန် ကြိုးပမ်းပါသည်။ ပုံသွင်းပြုလုပ်ရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်သုံးချက် 1. သင်မလုပ်နိုင်ပါ...
ယနေ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ CEO ဖြစ်သူ Jan နှင့် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ ဝယ်ယူမှုမန်နေဂျာများနှင့် ပရောဂျက်အင်ဂျင်နီယာများအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့ ၎င်း၏အဖွဲ့အား နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များဖြင့် ၎င်းတို့သည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တိကျသောမှိုနှင့် ပုံသွင်းထုတ်လုပ်သူ
အမှတ် ၅၊ Guihua လမ်း၊ Tangxia Yong အသိုက်အဝန်း၊ Songgang မြို့၊ Baoan ခရိုင်၊ Shenzhen။ တရုတ်။ ၅၁၈၁၀၅
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021- Guangdong Yuanfang Technology Industry Co., Ltd. All Rights Reserved. Hot Products များ - ဆိုက်မြေပုံ
ပလပ်စတစ်ထိုးဆေးမှိုထုတ်လုပ်သူ, ပလပ်စတစ်ထည့်သွင်းပုံသွင်းခြင်း။, ရှေ့ပြေးပုံစံမှိုထုတ်လုပ်သူများ, မှိုစက်ရုံ, မှိုထုတ်လုပ်သူများ, သတ္တုထည့်သွင်းမှုများဖြင့် ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း။,